Manova toe-tsaina amin'ny varotra atiny B2B (miaraka amin'ny statistika) | Martech Zone
Ny Group Economist dia nanao fanadihadiana lalina sy famakafakana ny toetran'ny B2B ary namokatra ity sary ity tamin'ny valiny. Isaky ny fanontaniana dia misy ny fampitahana ny veteran'orinasa amin'ny mpividy orinasa manaraka. Mahaliana ny mahita ny banga lehibe misy eo amin'izy roa.
Amin'ny fandinihana ireo banga, misy fahasamihafana mahavariana
Mahita ireo veteransan'ny orinasa tatitra fikarohana manampy bebe kokoa amin'ny 35% be izao!
Ny veteransan'ny orinasa, amin'ny 26%, dia mandany adiny efatra isan-kerinandro farafaharatsiny atiny fandraharahana.
Betsaka ny 25% no mety ho hitan'ny veteransan'ny fandraharahana whitepapers manampy kokoa.
Ny veteran'orinasa dia 23% no inoana fa hovonoin'ny atiny toa a fivarotana tampoka.
Ny veteran'orinasa dia toa 22% no maniry kokoa ny atiny amin'ny endrika lahatsoratra.
Angamba tsy mahagaga, tanora mpivarotra no mankafy ny atin'ny horonantsary (9%) raha oharina amin'ny veteranin'ny orinasa antonony. Ity dia porofo misimisy kokoa momba ny dia tsy manam-petra amin'ny dia ataon'ny mpanjifa izay ihantsiana ny mpivarotra atiny.
Tsindrio raha hanokatra ny habeny feno
Tags: b2batiny b2bveteranin'ny orinasaContent Marketingtanora mpandraharaha